Wasaaradda caafimaadka Galmudug oo agab caafimaad gaarsiisay isbitaalka magaalada Gaalkacyo+(SAWIRRO). | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wasaaradda caafimaadka Galmudug oo agab caafimaad gaarsiisay isbitaalka magaalada Gaalkacyo+(SAWIRRO).
Wasaaradda caafimaadka Galmudug oo agab caafimaad gaarsiisay isbitaalka magaalada Gaalkacyo+(SAWIRRO).
Wasaaradda caafimaadka maamul goboleedka Galmudug ayaa agab caafimaad gaarsiisay isbitaalka weyn ee magaalada Galkacyo ee xaruunta Gobolka Mudug kaas oo si lacag la’aan ah ku ugu shaqeeyo bulshada deeggaanka ,wasaaradu ayadoo ka duuleyso baahiya ay u qabaan dadka deegaanka ayeey dadaal xooggan galisay sidii loo tayeyn-lahaa adeegyada caafimaadka .
Madasha wareejinta agabkaan ayaa waxaa goob-jog ka ahaa gudoomiyaha gobalka Mudug, duqa dagmada Galkacyo, isku duwaha wasaarada caafimaadka ee gobalka, agaasimaha isbitaalka iyo wasiir Ku Xigeenka Wasaaradda caafimaadka Galmudug Dr Mahad Caabi Ciise,waxaana ugu horeyn goobta Ka Hadlay agaasimaha isbitaalka Dr Maxamed Cabdi Axmed asigoo sheegay Baahida uu bIsbitaalka u qabay agabkaan lasoo gaarsiiya.
Sidookale duqa dagmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale Iyo guddoomiyaha gobalka Mudug Cabdiraxmaan Cali Diiriye ayaa iyaguna bogaadiyay dadaalka wasaarada caafimaadka Galmudug ee la xariira xoojinta wax ka qabshada baahida adeegyada Caafimaadka ee gobalka Mudug .
Wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka maamulka galmudug Dr Mahad Caabi Ciise ayaa ka wrabixiyay qalabkaan ay maanta soo gaarsiiyeen isbitaalka magaaladda Gaalkacyo iyo dadaalada ay waddo wasaaradda caafimaad Galmudug.
Previous articleCiidanka Xoogga dalka oo Howl-galo ka dhan ah Al-Shabaab kawada Jubbada Hoose.
Next articleXubno ka tirsan TPLF oo maxkamad la hor keenay maanta.
Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in talaalka covid-19 uu dalka soo gaarayo bilowga bisha soo socota
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo soo dhaweeyey Heshiiska dhexmaray Dowladda iyo Midowga Musharaxiinta oo xalay wadajir loo soo saaray.
Akhriso Khudbadihii laga jeediyay shirkii dowladda Federaalka iyo Midowga Murashixiinta
Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in talaalka covid-19 uu dalka soo gaarayo...
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo soo dhaweeyey...